Munaasabad lagu Abaalmarinayay Kooxihii iyo Ciyaartoydii Kaalmaha hore ka galay Tartankii Ciyaaraha kala Duwan ee ddsi oo caawa ka dhacday hoolka shirarka ee SMCX. - Cakaara News
Munaasabad lagu Abaalmarinayay Kooxihii iyo Ciyaartoydii Kaalmaha hore ka galay Tartankii Ciyaaraha kala Duwan ee ddsi oo caawa ka dhacday hoolka shirarka ee SMCX.
Jigjiga(cakaaraSport) Talaado Sept 17,2013.Waxaa caawa ka dhacay hoolka shirarka ee S.M.C.X munaasabad balaadhan oo lagu abaalmarinayay kooxihii,Orodyahanadii iyo Ciyaartoydii kaalmaha hore ka galay tartankii ciyaaraha kala duduwanaa ee ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta u ah DDSI oo dhawan la soo gabagabeeyay.
Haddaba munaasabadan oo si aad u qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta xukuumada ugu saraysa oo uu hormuud u ahaa madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar sidoo kalan Madaxwayna ku-xigeenka ahna hogaanka nabadgalyada maamulka iyo cadaalada DDSI mudane c/laahi yuusuf weerar,golaha wasiirada capinetka DDSI, shaqaalaha xafiisyada heer-deegaan,Qaybaha bulshada iyo kooxihii ku tartamayay ciyaarihii kala duwanaa iyo ciyaartoydii dhamaantood.
Munaasabadan Abaalmarintan caawa ka dhacay hoolka shirarka ayaa waxaa si gaar ah loogu abaalmarinayay kooxihii kaalmaha hore ka galaytartankii gobolada iyo maamul-magaalooyinka ciyaarta kubada cagta, iyo kooxihii,ciyaartoydii iyo Orodyahanadaii kaalmaha hore ka galay dhamaan ciyaaraha fudud sida orodka,kubada kolayga iyo waliba Bootinta hoose,dhexe iyo ta sareba.
Munaasabadan abaalmarinta lagu gudoonsiinayay kooxihii kaalmaha hore galay ayaa waxaa abaalmarintaasi gudoonsiiyay madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar, waxaana abaalmarinta 1aad la gudoonsiiyay kooxdii ku guulaysatay tartanka ciyaaraha oo ah hormuudka kooxaha gobolada ee haysata koobka waa kooxda gobolka afdheere waxa la gudoonsiiyay abaalmarin dhan 15,0000 (boqol iyo konton kun oo birr) iyo waliba abaalmarino kale waxana gudoonsiiyay madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar.
waxaa abaalmarinta kaalinta 2aad la gudoonsiiyay kooxda gashay kaalinta 2aad oo ah kooxda ismaamulka magaalada Goday waxaana la gudoonsiiyay abaalmarin dhan 100,000 (boqol kun oo birr) halka kooxda kaalinta 3aad gashay ee gobolka siti la gudoonsiiyay abaalmarin dhan 70,000 (todobaatan kun oo birr).
sidoo kale waxa iyaguna abaalmarino kala duwan la gudoonsiiyay tababarayaashii ugu wanaagsanaa iyo kooxdii ugu Akhlaaqda wanaagsanayd oo noqotay gobolka siti.
Dhanka kale waxaa abaalmarin la siiyay kooxdii gashay kaalinta 1aad ee dhanka kubada kolayga oo noqotay ismaamulka magaalada jijiga iyo waliba kooxihii ka galay kaalmaha hore dhamaan ciyaaraha fudud.
Abaalmarin ka dib waxaa la hadlay kooxihii la gudoonsiiyay abaalmarinta iyo kuwii goob jooga ahaaba madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar oo wuxuuna ugu horayntii madaxwaynuhu ku amaanay dhamaan kooxdaha ka qayb qaatay tartanka ciyaaraha sida habsamida leh ee ay ku dheenayd akhlaaqda wanaagsan ee ay uga qayb qaateen.
Sidoo kale waxaa abaalmarino u badnaa lacag cadaana la siiyay Ciyaartoydii kaalimaha hore ka galay tartankii Orodada 100m,200m,1500,5000,orodka dheer,Bootinta Sare,Bootinka dhexe iyo xadhig jiidka la siiyay dhalinyaradii ku guulaysatay Madaxwaynuha ayaa tibaaxay in tatankani ahaa mid u qabsoomay sidii loogu tala galay si ka sii fiican iyo waliba in dhamaan deegaanka siwayn loola socday intii uu socday. Waxaa kale oo uu madaxwaynuhu sheegay in qorshayaasha xukuumada u dajisan ay ka mid tahay in deegaanka uu yeesho ciyaartoy u ciyaarta heer-caalam iyo heer-Qaranba taasina sida lagu gaadhi karaa tahay in siwayn loo dardargaliyo dhamaan ciyaaraha kala duwan ee deegaanka korna loo qaado khibrada,tababarada,jidh-dhiska iyo kartida dhalinyarada ciyaartoyda ah ee deegaanka.
Ugu danbaytii waxa uu madaxwaynuhu kula dar daarmay kooxaha kobolada iyo ismaamul magaalaba in ay koox waliba ku dadaasho sidii ay koobka uga soo qaadan lahay kooxda hada haysata koobka waa kooxda gobolka afdhheere kooxda gobolka afdheerna ku dadaasho sidii aan koobka loog soo qaadan Karin